ပင်မစာမျက်နှာ » ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပေါ်လစီ
ကျွန်ုပ်တို့၏က်ဘ်ဆိုက်လိပ်စာဖြစ်ပါသည်: https://www.appsapk.com ။
သင်တစ်ဦးမှတ်ချက် post သည့်အခါငါတို့သည်သင်တို့ထံမှသတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းပါ။ အမည်သို့မဟုတ် e-mail လိပ်စာ: အမိန့်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ပေါ်တွင်မှတ်ပုံတင်သည့်အခါသင့်လျော်သောအဖြစ်, သင်သည်သင်၏ရိုက်ထည့်ဖို့တောင်းနိုင်ပါသည်။ သငျသညျ, သို့သော်, အမည်ဝှက်ကျွန်ုပ်တို့၏ site သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုငျသညျ။ ငါတို့သည်လည်းအလိုအလျှောက်, AppsApk.com မှဧည့်သည်များနှင့် ပတ်သက်. အချို့သောအမည်မသိသတင်းအချက်အလက် log အပါအဝင်, ဒါပေမယ့်ကန့်သတ်ဘဲ, အအသုံးပြုသူကျွန်ုပ်တို့၏ site, အိုင်ပီလိပ်စာ, ရှာအသုံးအနှုန်းများအသုံးပြုသွားမည်, browser ကိုအမျိုးအစားနှင့်ကြည့်ရှုအားပေးစာမျက်နှာများတစ်စာဖတ်ခြင်းသမိုင်းသွားရောက်မှ လာ. အဘယ်မှာရှိလိမ့်မည်။
ပြိုင်ပွဲ, မြှင့်တင်ရေးသို့မဟုတ်အခြား site ကိုအင်္ဂါရပ်စီမံခန့်ခွဲရန်
ငါတို့သည်သင်တို့ဝင်သောအခါ, သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏လုံခြုံမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်တင်ပြရန်, သို့မဟုတ်သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များဝင်ရောက်ဖို့လုံခြုံရေးအစီအမံအမျိုးမျိုးအကောင်အထည်ဖော်ရန်။
ဟုတ်ကဲ့ကြှနျုပျတို့ပွု (ကွတ်ကီးသငျသညျကိုခွင့်ပြုလျှင်သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာ site တစ်ခုသို့မဟုတ်ယင်း၏ service provider ကလွှဲပြောင်းခက်ခဲသင်၏ Web browser ကို (တဆင့်မောင်းကြောင့်သေးငယ်တဲ့ဖိုင်တွေရှိပါတယ်) အချို့သတင်းအချက်အလက်သင့် browser အသိအမှတ်ပြုရန်နှင့်ဖမ်းယူခြင်းနှင့်မှတ်မိဖို့က်ဘ်ဆိုက်များသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုပေးစနစ်များကိုဖွကြောင်းကိုကျနော်တို့ နားလည်လျက်သိမ်းဆည်းသင့်ရဲ့ဦးစားပေးအနာဂတ်လာရောက်လည်ပတ်သူအဘို့, ကြော်ငြာများခြေရာခံစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ကျနော်တို့အနာဂတ်မှာပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ site ကိုအတွေ့အကြုံများနှင့် tools တွေကိုပူဇော်နိုင်အောင် site ကိုအသွားအလာနှင့် site အပြန်အလှန်အကြောင်းကိုစုစုပေါင်း data တွေကို compile ကွတ်ကီးကိုသုံးပါ။ ကျနော်တို့မှ Third-party ဝန်ဆောင်မှုပေးနှင့်အတူကျုံ့စေခြင်းငှါ ပိုကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ကိုဧည့်သည်ကိုနားလည်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီ။ အဲဒီဝန်ဆောင်မှုပေးငါတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်သွားရန်နှင့်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီပေးဖို့ မှလွဲ. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်စားကောက်ယူသတင်းအချက်အလက်သုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြုမထားပေ။
third party ကြော်ငြာ
ကျနော်တို့ကြော်ငြာများအစေခံခြင်းနှင့်သင်တို့သည်ငါတို့၏က်ဘ်ဆိုက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာ Non-ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသတ်မှတ်သတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းရန် Third-party ကြော်ငြာကုမ္ပဏီများသည်ကိုအသုံးပြုပါ။ ဤရွေ့ကားကုမ္ပဏီများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ website တွင်ကြော်ငြာများပေးနိုင်ရန်အတွက်သင့်ရဲ့ဤလည်ပတ်မှုနှင့်အခြားသောဝက်ဘ်ဆိုက်များအကြောင်းကို (သင့်အမည်, လိပ်စာ, အီးမေးလ်လိပ်စာ, သို့မဟုတ်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်အပါအဝင်မဟုတ်) သတင်းအချက်အလက်ကိုသုံးပါကတခြားဆိုဒ်များနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအကြောင်းမီဒီယာ၏အခြားပုံစံများစေခြင်းငှါ သငျသညျစိတ်ဝင်စားဖြစ်နိုင်သည်။ သင်တို့သည်ဤတတိယပါတီကြော်ငြာကုမ္ပဏီများသည်တချို့၏အလေ့အကျင့်နှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသိရှိလိုပါကကြိုက်တယ်နှင့်သင်သတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းခြင်း၏ဤအမျိုးအစားထွက်ရွေးချယ်ဖို့ခွင့်ပြုသောဤကုမ္ပဏီများဖြစ်သောသင်ယူမယ်ဆိုရင်, နှိပျပါ ဒီမှာ.
third party ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ
ကျနော်တို့ COPPA (ကလေးများအွန်လိုင်းသီးသန့်လုံခြုံရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအက်ဥပဒေ) ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်လိုက်နာမှု၌ရှိကြ၏, ငါတို့အသက် 13 နှစ်အောက်မည်သူမဆိုထံမှမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းကြပါဘူး။
အဆ Interactive မှ, Inc မှကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဖက်အဖြစ်လျာထားသောအွန်လိုင်းကြော်ငြာနှင့်ကြော်ငြာတိုင်းတာခြင်းပေးနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွင်အသုံးပြုသူများထံမှအိုင်ပီလိပ်စာနှင့် cookie ကို ID ကို၏ပုံစံအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒေတာစုဆောင်းကိုယ်ရေးအချက်အလက်ဖို့တရားဝင်အကျိုးစီးပွားရှိသည်။ ဘေးဖယ်ထုတ်တောင်းဆိုမှုများ, access ကိုတောင်းဆိုမှုများသို့မဟုတ်တိုင်ကြားချက်အပါအဝင်ပိုပြီးအသေးစိတ်အတွက်သူတို့ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ သို့မဟုတ်မိမိတို့၏ data တွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအရာရှိကနေတဆင့်ဆက်သွယ်ပါ privacy@exponential.com.
ANON_ID tribalfusion.com အဆိုပါအမည်မသိပါရှိသည်သောပရိုဖိုင်းဖို့ cookie ကိုလင့်များအတွက်ဝဘ်အသုံးပြုသူရဲ့ browser ကိုအိုင်ဒီ hashed
ယင်းအပြုအမူအသုံးပြုသူပြသထားပါတယ် တတိယ ခြေရာကောက် ဇှဲကောငျးသော3လအတွင်း
AppsApk မှဝင်ရောက်ခွင့်သို့မဟုတ် Third-party ကြော်ငြာရှင်များကအသုံးပြုနေကြသည်ဤ cookies တွေကိုထိန်းချုပ်အဘယ်သူမျှမရှိတယ်။
သင်သည်သူတို့၏အလေ့အထများအပေါ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်အဖြစ်အချို့သောအလေ့အကျင့်များထွက်ရွေးချယ်ဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းကိုညွှန်ကြားချက်ဤ Third-party ကြော်ငြာဆာဗာသက်ဆိုင်ရာ privacy ကိုမူဝါဒများနှင့်တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။ AppsApk ရဲ့ privacy ကိုမူဝါဒလျှောက်ထားပါဘူး, ကြှနျုပျတို့ထိုကဲ့သို့သောသည်အခြားကြော်ငြာရှင်များသို့မဟုတ် Website များ၏လှုပ်ရှားမှုများမထိန်းချုပ်နိုင်ပါ။
သငျသညျ cookies တွေကို disable လုပ်ဖို့ဆန္ဒရှိခဲ့လျှင်, သင်သည်သင်၏တစ်ဦးချင်းစီကို browser အတွက်ရွေးချယ်စရာများမှတဆင့်အဲဒီလိုဖြစ်နိုင်တယ်။ သတ်သတ်မှတ်မှတ်ကို web browser များနှင့်အတူ cookie ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအကြောင်းပိုမိုအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို browser များ '' သက်ဆိုင်ရာဝက်ဘ်ဆိုက်များမှာတှေ့နိုငျပါသညျ။
ကျနော်တို့ AppsApk အသုံးပြုသူများအများ၏အသုံးပြုမှုနှင့် browsing အတွက်ပုံစံများနှင့် ပတ်သက်. တတိယပါတီသတင်းအချက်အလက်, အစီရင်ခံစာများနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသုံးပါ။ ကျနော်တို့တတိယပါတီ analytics ကုမ္ပဏီများမှ AppsApk အပေါ် web beacons နှင့် cookies များကိုထည့်သွင်းရန်ခွင့်ပြုသည်။ အဆိုပါကောက်ယူသတင်းအချက်အလက်ရှာဖွေရေးအသုံးအနှုန်းများ, ရှာ parameters များကိုအသုံးပြုသူများအားဖြင့်-through ကိုကလစ်နှိပ်ပါနှင့်အခြားအလားတူသတင်းအချက်အလက်ပါဝင်သည်။ ကျနော်တို့ AppsApk တိုးတက်စေခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အသုံးပြုသူများမှသက်ဆိုင်ရာနှင့်အသုံးဝင်သောအကြောင်းအရာပို့ဆောင်နေကြသည်သေချာစေရန်ဤအချက်အလက်အသုံးချ။ ကျနော်တို့သုံးတဲ့ Analytics မှ AppsApk ၏တစ်ဦးချင်းစီသည်အသုံးပြုသူများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ကြပါဘူး။
ကြှနျုပျတို့၏ site သုံးခွငျးဖွငျ့သငျသညျကြှနျုပျတို့၏ website ရဲ့ privacy ကိုမူဝါဒကသဘောတူသည်။
appsapk [dot] com [မှာ] admin ရဲ့: အသုံးပြုသူများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ privacy ကိုမူဝါဒအဘယ်သူမျှပမာဏမေးခွန်းများကိုသို့မဟုတ်အကြံပြုချက်များရှိပါကမှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။